I-Cocoon Luxury Villa e-Coral Bay-3 iminithi ukuya ebhishi - I-Airbnb
I-Cocoon Luxury Villa e-Coral Bay-3 iminithi ukuya ebhishi
Peyia, Paphos, i-Cyprus
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Nikolas
U-Nikolas Ungumbungazi ovelele
I-Cocoon villa iwumkhosi wokugubha imvelo nokuhluka ngomklamo wayo wesimanje nokunaka imininingwane. Ifaka ikhishi elikhulu kakhulu, amagumbi okulala amathathu namagumbi okugeza amathathu kanye nokubuka okungenamkhawulo koLwandle iMedithera. Itholakala endaweni edumile yaseCoral Bay, nje ukuhamba ngemizuzu emi-3 ukuya ogwini kanye nemizuzu emi-5 ukuya ezitolo ezinhle kakhulu, izindawo zokudlela kanye nemigoqo. I-crescendo yendaba iyindawo eyimfihlo yokuzijabulisa engaphandle ngokuphelele, egcwele imibhede yelanga ewubukhazikhazi kanye ne-BBQ/Ibha ehlome ngokuphelele.
I-Space ihlonyiswe kakhulu ngalokhu okulandelayo:
Iphuli Enkulu (4.5m x 9m)
Imibhede yobukhulu benkosi
3 amagumbi okugezela okunethezeka
Ikhishi elifakwe ngokugcwele
Igumbi lokuhlala kanye nendawo yokudlela ikwazi ukubamba amaqembu amakhulu
55” I-Smart TV enoxhumo lwe-Netflix
Isivinini esiphezulu se-WIFI
Amathawula wamahhala (Igumbi lokugeza kanye nephuli)
I-HDTV engu-55" ene- I-Netflix, ikhebula ye-premium
Hello there, my name is Nicolas. I enjoy meeting new people and familiarizing myself with other cultures. This is essentially why I have decided to become an Airbnb host! I’m obsessed with traveling, visited many European cities in the past 4 years.
Looking forward to meeting you! I will do my best to make your stay comfortable and help you enjoy a lovely and relaxing holidays! Feel free to reach out to me if you have any questions about my property.
Hello there, my name is Nicolas. I enjoy meeting new people and familiarizing myself with other cultures. This is essentially why I have decided to become an Airbnb host! I’m obses…
UNikolas Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Peyia namaphethelo